Studio Kondenser USB Makarafoonka oo leh Qalabyo Isku-dhafan & Isugeyn Xoog
dib u eegista 78
$ 101.99 qiimaha joogtada ah $ 144.99
maraakiibta From Shiinaha United States SPAIN Russian Federation
Shiinaha United States SPAIN Russian Federation
Studio Condenser USB Microphone With Versatile & Sturdy Broadcast Scissor Arm - China gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Qaabka: Microphone-yada Daldala
Soo-dejiye: Mikrofoonka Electretka
Nooca Dejinta: Qalabka Muuqaalada-Badan
Jawaabta Soocelinta: 50Hz-20kHz
Xasaasi: -43 ± 3dB (at 1kHz)
Saamiga S / N: 78 dB
Max.SPL: 130dB (1kHz≤1% THD)
Soo Saarista USB: Waxay awood u siineysaa qaabeyn fudud. Qalabka kumbuyuutarka ee loo yaqaan 'USB Microphone Kit' ayaa si toos ah ugu habboon isku-xir-ka-ciyaar iyo isku xirnaanta kumbuyuutarrada Mac iyo Windows iyada oo aan lahayn qalab dheeri ah oo loogu talagalay duubista codadka, boodhadhka, iyo Skype. Marnaba ma fududaan in cod tayo sare leh loo helo codkaaga iyo duubabka maqalka ee ku saleysan kumbuyuutarka. (Lama jaan qaada Xbox iyo Phones)
Tayo Wanaagsan oo Tayo leh: Dhismo adag oo loogu talagalay waxqabadka waara, makarafoonka codku wuxuu bixiyaa jawaab celin soo noqnoqota oo ballaaran wuxuuna sifeeyaa SPLs sare fudeyd leh Ujeedada mashruucyada / codsiyada istuudiyaha guriga. Kaabsoolka wadnaha ee wadnaha ayaa bixiya dhawaaq maqal ah oo nadiif ah oo loogu talagalay isgaadhsiinta, abuurista, iyo duubista. Wuxuu diyaar u yahay inuu la socdo muraayad kumbuyuutar kumbuyuutareed iyo fiilada USB-ga 2.5M, waxaa laguu balan qaadayaa inaad heshid natiijooyin codad badan.
Gacanta Mudada Dheer: Studio Microphone oo leh qalab isweydaarsi badan oo adag oo isdaba joog ah oo maqas ah ayaa ku siinaya aalado aad u fiican oo codkaaga ku soo qabsan kara boodhadhka ama codka. Filterka Double Pop wuxuu siiyaa laba lakab oo kala firidhsan, wuxuu saaraa qulqulka hawada ee ay keento dhawaqyada codku, isagoo yareeya dhawaaqyada soo baxa ee wax u dhimi kara duubistaadu waxay ku fiican tahay istudiyaha iyo sidoo kale isticmaalka guriga.
Si Fudud Loogu Dhejiyo: Microphone-ka qulqulaya isugeynta isugeynta qalabka maqalka ee 'Arm Stand' wuxuu leeyahay astaamo culus oo isku dhafan oo ka kooban adkeyn adag oo C-clamp ah iyo miis dusha laga jaro oo lagala baxo. Iyada oo leh 13 "gacan jiifsan oo go'an oo bixisa 30" gaari. Naqshad-hooseeya, miiska isku duubiddu waxay u oggolaaneysaa hibada hawada inay wax qabato iyadoo aan wajiga la is-hortaagin si loo duubo fiidiyowyada ama loo sameeyo codad duuban oo loogu talagalay fiidiyowyada, loo adeegsado wadahadalka codka ee ciyaaraha internetka, ama ganacsi laga sameeyo Skype.
Xirmada Qalabka ee ay Kujiraan: Taagida gacanta maqaska waxaa laga sameeyey dhismaha birta oo dhan, adag oo waara. Feejignaan naxdin leh oo heer-studio ah, shaandheeye laba-jibbaar ah, qaddarka 9.84 'fiilada USB-ka, istaag ku-meel-gaar ah, makarafoon loogu talagalay duubista Podcast, buuga isticmaalaha, iyo Taageerada Farsamada Bilaashka ah. Dammaanad Hal Sano ah.
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 78